Ummu Salama waxay tiri, markii aan ka dhaqaaqnay fadhigii boqorka Najaashi waxaa na handdaday oo noo gooddiyay Camar Bin Caas, wuxuuna saaxiibkiis ku yiri, waxaan berito u tagayaa boqorka annigoo u sheegi doono hadal boqorka ku abuura inuu idin caroodo. ,p> Cabdullaahi Binu Abii Rabiica ayaa ku yiri Camar: ha samaynin sidaas, inkastoo ay na khilaafeen haddana waa xigtadeenii. Camar ayaa markale ugu jawaabay adiga faraha iga qaad, wallaahi inaan boqorka u sheegi doono inay Nebi Ciise ka aaminsan yihiin inuu yahay addoon. Maalintii danbe markii la gaaray ayaa Camar wuxuu u galay boqorkii Najaashi, wuxuuna ku yiri boqorow kuwan aad magangalyada siisay waxay ku sheegayaan Ciise Ina Maryama hadal aad u weyn, sidaas darteed intaad u yeertid waxaad weydiisaa waxa ay Ciise ka aaminsan yihiin. Waxay tiri Ummu Salama, markaan arrinkaas ogaannay waxaa nagu soo kordhay murugo iyo tiiraanyo aanan horey noo qabsan, waxaynu is niri, hadduu boqorka wax naga su'aalo Nebi Ciise (cs) maxaynu niraahnaa??. Waxaan isla garanay inay habboon tahay inaan su'aashaas aan uga jawaabno oraahdii uu Allaah ka yiri Ciise, innagoo wax kale aanan ku siyaadinin, dabadeedna wixii markaas kadib dhacayo ha dhaceen. Waxaan markale isla garannay inuu noo hadlo Jacfar Bin Abii Dhaalib. Markaan hor nimid boqorkii Najaashi, wuxuu na weydiiyay waxa aan ka aaminsannahay Ciise Ina Maryam, wuxuuna Jacfar ku yiri boqorka �Nebi Ciise waxaan ka leenahay oo keliya waa wixii uu nooga waramay Nebigeena Muxammad (scw)�. Boqorkii ayaa raaciyay su�aashaan �waa maxay waxaasi??�.
Suubbanaha Rasuulka (scw) si aan la tilmaami karin ayuu ugu farxay imaanshaha Jacfar, intuu laabtiisii sharafta badnayd ku soo dumay Jacfar ayaa wuxuu ku yiri �ma waxaynu ku faraxnaa furashada Khaybar mise imaanshaha Jacfar??. Farxaddaasi uu Rasuulka (scw) ka muujiyay imaanshaha Jacfar kama yareyn tan guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan kuwii masaakiinta ahaa ay ugu farxeen imaanshaha Jacfar iyo asxaabta kale. Maxaa yeelay, Jacfar wuxuu aad u xiriirin jiray una dhaqaalayn jiray masaakiinta muslimiinta ee waxna aan haysan, waxayna taageeradiisa masaakiinta ay keentay in loogu magac-daro �aabihii masaakiinta�. Abuu Hureyra Allaha ka raalli noqdee oo arrinkan ka sheekeenaya ayaa yiri �haddaynu ahayn jamaacada masaakiinta Jacfar wuxuu noo ahaa qofka noogu roon dadka, gurigiisa ayuu intuu noo kaxeeyo ayuu na soo siin jiray waxa yaala oo cunto ah..�.
Asmaa oo dareenkeeda maalintaas cabbiraysa ayaa waxay tiri �markii uu noo yimid Rasuulka (scw) waxaan wejigiisa qiimaha badnaa ka aqristay murugo weyn, waxaa naftaydii gashay cabsi, hase ahaatee ma aanan jeclaysan inaan weydiiyo su�aalo ku saabsan arrinta ninkayga Jacfar, cabsi awgeed aan ka qabo inaan maqlo war aan i farax gelin. Rasuulka (scw) wuu na salaamay, wuxuuna intaa kadib igu yiri waxaad iigu yeertaa caruurta Jacfar, waana u yeeray. Caruurtii oo faraxsan ayaa xagga Rasuulka (scw) ku soo cararay, mid walba oo caruurta ka mid ah wuxuu doonayay inuu ku dhago ama qabsado jirka Rasuulka (scw). Dhinaca kale, Rasuulka (scw) isna wuxuu ku soo foorarsaday caruurtii, isagoo dhunkanaya isla mar ahaantaasna ay indhihiisii sharafta badnaa ay ilmeenayaan. ,p. Waxaan ku iri �hooyaday iyo aabahay ha lagugu furtee- maxaad la oonaysaa?? Ma Jacfar iyo labadiisii saaxiib ayaa dhibaato soo gaartay?. Wuxuu Rasuulka (scw) �HAA.., oo maanta ayay shahiideen�. Markay hadalkaasi uu yiriba waxay farxaddii iyo muusoodkii isu baddashay naxdin iyo walbahaar. Caruurtii yaraa ee faraxsanaa markay maqleen oohinta hooyadood waxaa ka soo haray degganaansho lagu hareeyay tiiraanyo daran.